Ciidamad Si Gaarka Ah U Tobabaran Ee Somaliya Oo Hawl Gal Qorshaynsan Ka Fuliyay Deegaanka Mubaarik Ee Gobolka Shabeelaha Hoose
Wednesday, 12 September 2018 13:00
12/09/2018(BNN) Ciidamada Amniga ee sida gaarka u tababaran ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanka Mubaarak ee Gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana howl galka kaddib ciidamada ay dib isaga soo baxeen deegaanka.
Qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka ee NISA ayaa lagu sheegay in howlgalka lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab, kaddib is rasaasseyn dhex martay ciidanka iyo maleeshiyo ka tirsan Shabaab.
“Howlgal uu ciidanka amnigu ka fuliyay Deegaanka Mubaarak ee Gobalka Shabeellaha Hoose habeennimadii 11-ka Sebtembar, ayaa is rasaaseyn kadib waxaa lagu dilay xubin Al–Shabaab ah, kuwa kalana lagu dhaawacay, Kooxdaan ayaa ku howlanaa weeraro ay ka gaysataan magaalada Muqdisho”ayaa lagu yidhi qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka ee NISA.
Sidoo kale waxaa lagu sheegay in ciidamada amniga ay dib isaga soo baxeen deegaanka, si dagaalka uusan shacabka waxyeello uga soo gaarin.
“Ciidamada amniga ayaa dib uga soo baxay dagaalka si aysan shacab wax uga soo gaarin., Ciidamada Amniga waxaa ka go’an inay shacabka ilaaliyaan halka Alshabab ay had iyo jeer beegsadaan dadka rayidka ah kuna dhax dhuuntaan”ayaa lagu lagu qoray barta Twitter-ka ee NISA.
Magaalada Muqdisho iyo deegaanada u dhow dhow ayaa Ciidamada ammaanka ka fuliyaan howlgalo qorsheysan.
More in this category: « DAAWO: Maamul Goboleedka Galmudug Oo Eedaymo Culus U Jeediyay Madaxwaynaha Jamuuriyda Fadaraalka Somaliya Md Farmaajo + Waxyaabaha Ay Ku Eedeeyeen Deg Deg: Madaxwayne Farmaajo Oo Kulan Kula Qaatay Magaalada Adis Ababa Madaxwaynaha Dawlada Degaanka Mustafe Cagjar Iyo Waxyaabaha Ay Ka Wada Hadleen »